Dowlada Ingiriiska oo fariin Wanaagsan ujeedisay Shacabka Soomaaliyeed | Building Momentum
Dowlada Ingiriiska oo fariin Wanaagsan ujeedisay Shacabka Soomaaliyeed
Posted on February 4, 2012 by somaliamomentum
Dowladda Ingiriiska ayaa waxay xilligaan u muuqataa mid u istaagtay arrimaha Wadanka Somaliya iyo sidii dhibaatada ka taagan looga saari lahaa, maadaama ay xilligaan muujineyso dadaal wanaagsan oo ku aadan arrimaha dalka Soomaaliya.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Dowladda Ingiriiska William Hagueoo wareysi gaar ah siiyay Idaacada BBC-da laanteead afka Somaliga, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Dowladda Ingiriiska ay dooneyso inay gacan ka geysato xaaladda adag ee ka jirta dalka Somaliya. Maadaama Dowladda Ingiriiska ay u soo jeedsatay arrimaha Soomaaliya, ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in shacabka Somaliyeed looga baahan yahay inay ka faa’iideystaan buu yiri Shirka London, oo 23-ka bishaan ka furman doona Magaaladda London. Shirka London ayaa wuxuu tilmaamay in si weyn looga hadli doono arrimaha Wadanka Somaliya, isagoo xusay inay ka soo qeyb-gelli doonaan dhamaanba dhinacyada Soomaalida, marka laga reebo kooxda Al Shabaab oo loo-arko mid xiriir la-leh kooxda Al Qaacida. Shacabka Somaliyeed ayaa wuxuu u rajeeyay inay ka bixi doonaan dhibaatada xoogan ee ay ku soo jireyn muddo dheer, isla-markaana wuxuu xusay in lagama maarmaan ay tahay, in shacabka Somaliyeed ay dadaalkooda ku aadan Shirka London ay muujiyaan. Hadaba Shacabka Somaliyeed ayaa waxay siyaabooyin kala duwan ay u fasirinayaan Shirka London ka furmanaaya, laakiin inta badan shacabka ayaa waxay qabaan in wax wanaagsan ay ka soo bixi doonaan Shirka London.